Lalao Ravalomanana : « Hiaraka isika hanorina firenena vanona, hiara-hiasa isika hanangana ny rava » – MyDago.com aime Madagascar
Tonga nanotrona ny fotoam-pivavahana lehibe nokarakarain’ny Synodamparintany Vonizongo Vavolombelona androany ny vadin’ny filoha mpanampin’ny FJKM, Lalao Ravalomanana.Tao amin’ny fitandremana Ambohimarina Fahazavana, distrikta Ankazobe, no notanterahana ny fotoam-bavaka ka ireo fitandremana rehetra miisa 35 amin’io synoda io no tonga nanotrona izany.Nitarika ny fotoam-pivavahana tamin’izany ny Mpitandrina Prezidà synodaly Andriamanantsoa Solofo, ny tonian’ny Departemantan’ny Fiangonana FJKM Foibe Radimison Jonah, ny Mpitandrina Ravelonanosy Mamy Tiana, sy ireo mpitandrina rehetra anatin’ny Synodamparintany Vonizongo Vavolombelona .Ny Deotoronomia 31 : 1-8 no nitondrana ny tenin’y soratra masina tamin’izany. Izay Anatra farany nataon’i Mosesy tamin’ny Isiraely sy Josoa, ary ny fanaperany ny lalàna. « Mahereza sy matanjaha; fa ianao sy ity firenena ity dia hiara-miditra ao amin’ny tany izay nianianan’i Jehovah tamin’ny razany homena azy; ary ianao no hampandova azy izany. Ary Jehovah no mandeha eo alohanao; ary Izy no hiaraka aminao; tsy handao anao na hahafoy anao Izy; koa aza matahotra na mivadi-po ianao. «
Tamin’ny fandraisam-pitenenan-dRamatoa Ravalomanana Lalao no nitondrany fisaorana lehibe tamin’ireo fanomeza azony noho ny fetin’ny reny.Faly aho ary tena faly hoy izy noho izao fihaonan-tsika izao.Entiko etoana ny fisaoranay mivady tamin’ny fitrotroana am-bavaka anay tamin’ireny zavatra niseho tamin’ny fiainanay ireny.Vao maika hampitombo ny finoanay ireny fisedrana ireny hoy izy. Raha ny momba ny « Dada » manokana hoy i « Neny » dia mivàvàha ka aza mitrahatra fa misy ny fotoana ny zavatra rehetra ary hasehon’Andriamanitra ny voninahiny.Mankahery hatrany koa Ramatoa Lalao Ravalomanana hoan’ireo nijoro vavolombelon’ny fahamarinana.Notsindriany manokana teto ihany koa ny voasoratra ao amin’ny Mika 6-8 : « Ry zanak’olombelona, efa nolazainy taminao izay tsara. Ary inona moa no takin’i Jehovah aminao, afa-tsy ny hanao ny rariny sy ny ho tia hatsaram-panahy ary ny hanetry tena rehefa miara-mandeha amin’Andriamanitrao? ».Feno hery aho hoy i Neny tamin’ny vavaka nataontsika teo.Vonona aho hoy Ramatoa Lalao Ravalomanana. »Hiaraka isika hanorina firenena vanona, hiara-hiasa isika hanangana ny rava ».Noho ny fetin’ny reny moa dia nanolotra bodofotsy miisa 40 hoan’ireo vadin’ny mpitandrina i Neny ary koa bodofotsy enina ho an’ireo be antitra teo an-tanana.
Auteur Solo Razafy*Publié le 26 mai 2013 28 mai 2013 Catégories Politique
10 réflexions sur « Lalao Ravalomanana : « Hiaraka isika hanorina firenena vanona, hiara-hiasa isika hanangana ny rava » »
26 mai 2013 à 18 h 26 min
Izay firenena vanona izay no tsy tian’ny sasany hitsangana eto. Tsara raha heverina dieny izao koa ny tsy hiverenan’ny toe-jaavatra toy izao manjo ny tanintsika izao.
manahy hoan 'ny hitarika firenena dit :
27 mai 2013 à 4 h 55 min
Sao dia diso tanjona kosa aza i Neny, sao dia hanao pasitera no mety aminy ????
tena asa mendrika ny ho mpitarika ny vahoakan’Andriamanitra
Sady aleo manompo ny Tompo to izay manao politika
27 mai 2013 à 8 h 13 min
Mampanahy ve ?
Ho tonga ary hanao inona any Madagasikara indray ilay Simao, kanefa ny SADC efa nilaza fa nanampakevitra ? Nilaza mantsy ry zareo fa dia hanaraka ny UA sy ny ONU sns….!
Miharihary izao fa hatry ny ela ry zareo no tena voabaiko, ary tsy mahagaga rahatoa ka izay nolazainy fa tondrozotra hamaha ny krizy, no lasa menaka nampirehatra sy nampiredareda ny afo !
Nofahanan-dalitra ny vahoaka malagasy, satria mihevitra ry zareo fa na jamba na dia tena ramaka tsy manan-kohanina !
Zavatra tsy fihinana no noterena hoanin-dramalagasy !
Mba miangavy re ry zareo, mba stopper-ho kely indray aloha ny Tournées bibliques, fa tsy Andriamanitra mihintsy no hihidina eto an-tany sy hamahy ny krizy â !
Resaka tena paolitika avo lenta, sy fitakiana ny fanajàna ny zoan’ny vahoaka malagasy izao no tokony hamafisina, ary atao hitan’izao tontolo izao !
Madagascar : la SADC s’aligne sur l’UA ( la SADC ne reconnaitra donc pas la victoire de l’un des trois candidats, que la Communauté internationale considère comme INDESIRABLES ).
Efa ela aho no nilaza fa « peuple masochiste » angamba ny malagasy !
Mitohy ny sinema ! Amin’ny Fetin’ny Reny 2014 isika dia mbola ho eto daholo ihany ê !
Fa amin’izay fotoana izay, mba hiaina an’izany fahaleovantena izany sa dia mbola ho entin’ny mpanongam-panjakàna amin’ny sofiny daholo ???
Mila matotra kokoa ny fandaminana ny programa e;
Nisy olona niandry niaritra orana tetsy Anosivavaka omaly raha nanao fampilazana fa ho avy eo i Neny .
Ny losifera dia tsy maintsy mitady lalana foana handrebirebena,
hamiliviliana ny marina sy ny tolona, tsy mety ve raha tsy mamingam-pingana foana e???
Tahotra sa fiatsaram-belatsia???Mankaleo ity mody fanovanovana anarana eto nefa dia hita fa olona iray ihany no mitady
handemy sy handrebireby eto.
Tsy ho pasitera akory no tanjona fa ny ho filohampirenena , asa tsara ny pasitera fa mila azy koa ny firenena , mbola tsy propangady izao dia tsy maintsy izay azo atao aloha no atao, tsy maintsy manara-dàlana na dia firenena tsy misy làlana ary izao misy antsika izao dia aleo ihany mitandrina
Fa tena ho raikitra ve ity ffdianana e???@’izao toe-draharaha izao ve???
Ny radio ny Gadra tsy mbola misy tokotaniny, mbola foza daholo koa no any , manomboka
@ lehiben’ny fokontany anie e???
Marina io Ranavalona a! fa na misy fifidianana na tsy misy fifidianana dia fomba iray aloa ity zava-misy ity hahazoantsika mba mampandroso ny tolona amin’ny endriny hafa satria afaka hamaritana ny herin’ny Ravalomanana fa tena mbola filoha mami-bahoaka ny tenany no niniana nesorina teo, izay aloha no hita hatreto , fa mila mitady hevitra hafa indray isika hahazoana manatsara an’izay efa eo an-tanana izay mba tsy ho votritra intsony ilay hery.
Précédent Article précédent : Firariants​oa avy amin’i Neny
Suivant Article suivant : Maika RAVALOMANANA : Tonga an-tanindrazana androany